Mpekere abụọ jikọtara imewe Gold plated Lapel Pin Marathon Medal Badge Set
Azụ: aja-agbawara na akara akara + 1 nkwado post
Acc.: Urukurubụba ipigide / roba ipigide
Ọkpụkpụ: enamel dị nro, iberibe abụọ jikọtara
Agba enamel dị nro dị ala karịa ahịrị ọla ndị gbara ya gburugburu, elu ahụ nwere mmetụta dị ike nke emetụ n'ahụ.
Enwere ike ịcha ncha enamel na agba ọ bụla ma ọ bụ jiri agba Pantone.
A na-eme osisi na ọnwụ tupu ịgbakwunye agba enamel dị nro.
Soft enamel dịtụ ọnụ ma dabara adaba maka ọtụtụ akara baajị, mkpụrụ ego, nrite, igodo, mkpado, kọflịnks na ngwaahịa ndị ọzọ.
Omenala enamel nro:
a makwaara dị ka 'embossed enamel pin', bụ ezigbo mma kụrụ baajị ọla jupụtara na enamel colorby aka. Ihe dị iche na ntanetụ enamel dị nro bụ ebe dị nro nke enamel dị ala karịa ebe ndị a zụlitere gburugburu ya.
Soft enamel pin na-adị mma maka ọtụtụ oge, site na njirimara ụlọ ọrụ na ebe ncheta ncheta maka ọrụ ndị ọrụ na ndị na-azụ ahịa otu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwere imepụta ihe dị mfe ma ọ bụ dabara adaba.
Nke gara aga: Gold Splated Soft Enamel Brooch Medal Custom Design National Flag Lapel Pin
Osote: National Flag Metal Lapel Pin Badge Set Diamond Trophy Die Casted Gold Medal of Honor
Omenala Enamel dị ọnụ ala
Mara Mma Pin Badges
Mara mma mkpọ
Dragọn ahụ Enamel Pin
Enamel Pin Onye kere
Ewute Enamel mkpọ
Metal Crafts Gold plated Lapel Pin Omenala Desig ...
Emeputa omenala ejiji ike enamel lapel ...
Omenala Enamel Pin Anọ Leel klochie Soft Enamel ...